सोमबार, अप्रिल 12, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 माइकल रेनल्ड्स
जो कोही मलाई चिन्छ शायद म जान्दछु कि म एक ठूलो प्रशंसक हुँ Google Apps। पूर्ण खुलासा, स्पिनवेब एक गुगल अनुप्रयोग अधिकृत पुनर्विक्रेता, त्यसैले उत्पाद प्रति हाम्रो प्रतिबद्धता धेरै स्पष्ट छ। त्यहाँ गुगल अनुप्रयोगहरू बारे उत्साहित हुनुपर्ने धेरै राम्रो कारणहरू छन्, तथापि ... विशेष गरी साना व्यवसायको रूपमा।
Google Apps वास्तव मा माईक्रोसफ्ट अफिस को लागी एक प्रतिस्थापन हो। जब म मानिसहरूलाई यो भन्छु, तिनीहरू कहिलेकाँही धेरै सशंकित हुन्छन्, त्यसैले म पूर्ण रूपमा गर्दछु संगोष्ठी शीर्षकमा यस विषयमा थप प्रकाश दिन। गुगल अनुप्रयोगमा जम्प गर्ने व्यवसायले एउटा पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ जुन ईमेल, क्यालेन्डरिंग, कागजात व्यवस्थापन, भिडियो कन्फरेन्सिंग, र सम्पर्क व्यवस्थापन समावेश गर्दछ जुन लागतको एक अंशमा माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्जसँग प्रतिस्पर्धा गर्दछ। एक नजर हेरौं
गुगल ईमेल: एक्सचेन्जको शक्तिशाली विकल्प
ईमेल भित्र Google Apps जिमेल हो जुन हामी सबैलाई थाहा छ र माया गर्छौं। जहाँसम्म, गुगल अनुप्रयोगले तपाईंको कम्पनीको डोमेन नामको साथ तपाईको ईमेललाई ब्रान्ड गर्न दिन्छ कि यो व्यावसायिक ब्रान्ड गरिएको छ भनेर निश्चित गर्न। कोही पनि व्यवसायको लागि उपभोक्ता ईमेल प्रयोग गर्न चाहँदैन, हैन? गुगल अनुप्रयोग ब्यापारका लागि जीमेल हो, र केहि थप सुविधाहरू जस्तै अनुकूलित स्पाम फिल्टरि attach र एट्याच्मेन्ट नीतिहरू समावेश गर्दछ। यसले माईग्रेसन उपकरणहरू पनि समावेश गर्दछ जुन एक्सचेन्जबाट प्रवास गर्न सजिलो बनाउँदछ। वेब, ईमेल क्लाइन्ट (आउटलुक वा एप्पल मेल जस्तै), र मोबाइल उपकरण मार्फत ईमेल पहुँच गर्न सकिन्छ। प्रत्येक प्रयोगकर्ताको लागि पूर्वनिर्धारित कोटा २GB जीबी हो, जुन धेरै उदार छ।
थप रूपमा, गुगलको ईमेलमा स्पाम र भाइरस फिल्टरिंग वास्तवमै उद्योगमा सबै भन्दा राम्रो हो। म शायद कम मिल्दो झूटा सकारात्मक देख्छु र सब भन्दा अनावश्यक ईमेल समातिएको छ र फिल्टर गरिएको छ। गुगल अनुप्रयोगमा सार्नाले वास्तवमा तेस्रो-पक्ष फिल्टरि solutions समाधानहरूको आवश्यकता हटाउँदछ।
ठूला केटाहरू जस्तै क्यालेन्डर गर्दै
यसमा क्यालेन्डर सुविधाहरू Google Apps अचम्मको छ संगठनहरूले दुबै व्यक्ति र संसाधनहरू (जस्तै कन्फरेन्स कोठा, प्रोजेक्टरहरू, इत्यादि) का साथ केहि क्लिकहरूसँग बैठकहरू निर्धारित गर्न सक्दछन्। टोलीका सदस्यहरूले अन्य कर्मचारीहरूका कार्यक्रमहरू पनि हेर्न सक्दछन् र स्वतन्त्र / व्यस्त जानकारी पनि सजिलैसँग हेर्न सक्दछन्। यसले संगठन भित्र स्केडिंग बैठक बनाउँछ तस्वीर। बैठक रिमाइन्डर ईमेल वा पाठ सन्देश मार्फत पठाउन सकिन्छ र प्रत्येक प्रयोगकर्ता द्वारा अनुकूलित छन्।
क्लाउडमा पूरा अफिस सुइट
म गुगल अनुप्रयोगहरूको कागजात सुविधाको बारेमा साँच्चिकै उत्साहित छु। प्रायः संगठनहरूले वर्ड, एक्सेल र पावरपोइन्टलाई उनीहरूको पूर्वनिर्धारित कार्यालय सफ्टवेयरको रूपमा प्रयोग गर्छन्। यसको मतलब सबै कम्प्युटरहरूमा सफ्टवेयर स्थापना गर्नुका साथै समर्थन र यसलाई कायम राख्नु हो। यो महँगो हुन सक्छ। यो सबै Google कागजातको साथ टाढा जान सक्छ। संगठनहरूले अब सबै कागजातहरू एकै ठाउँमा भण्डार गर्न सक्दछन् र केहि स्मार्ट विधिहरूमा तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्दछन्।
गुगल डक्सको बारेमा राम्रो कुरा के हो भने यसले निराशता हटाउँदछ "कसले त्यो कागजातको नयाँ संस्करण छ?" गुगल डक्सको साथ, सबै कागजातहरू सिधा प्रणालीमा सिर्जना गरिन्छ र त्यहाँ कुनै पनि कागजातको एक पटक मात्र प्रतिलिपि हुन्छ। कर्मचारी कागजातहरूमा सहकार्य गर्न र परिवर्तन गर्न सक्दछन् र सबै संशोधनहरू ट्र्याक गरिएका छन् ताकि तपाईं जहिले पनि पछिल्लो संस्करणमा फिर्ता रोल गर्न सक्नुहुनेछ र कसले के गरे हेर्नुहोस्।
संगठनहरूले कागजातहरूको पुरै लाइब्रेरी गुगल डक्समा राख्न सक्दछन् र १००% कागजविहीन हुन सक्छ किनकि तपाईं कुनै फाईल प्रकार अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो या त सम्पादित गुगल कागजातमा रूपान्तरण हुनेछ वा फाइल सर्भरमा मात्र भण्डारण हुनेछ। गुगल कागजातले तपाईलाई फाईल सर्वर, साझेदारी ड्राइभ, र अफिस सुइट सबै दिन्छ जसको बारेमा चिन्ता गर्नका लागि कुनै हार्डवेयर वा सफ्टवेयर छैन।
गुगल कुराकानीको साथ व्यक्तिगत पाउनुहोस्
अर्को राम्रो सुविधा Google Apps भिडियो च्याट सुविधा हो। वेबक्यामको साथ कुनै पनि कर्मचारीले सहकार्यलाई सजिलो बनाउन अर्को प्रयोगकर्ताको साथ भिडियो कन्फरेन्सिंग सत्रमा संलग्न गर्न सक्दछन्। गुणवत्ता उत्कृष्ट छ र तपाईं आफ्नो कम्पनी बाहिर अन्य गुगल प्रयोगकर्ताहरू संग सम्मेलन गर्न सक्नुहुन्छ। यो ईन्टरप्राइज भिडियो कन्फरेन्सिंग समाधानको रूपमा कल्पित होइन तर यो धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ र धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरूका लागि एक उत्तम समाधान हो।
मा सबै प्रकार्यहरू Google Apps मोबाइल उपकरणहरूको साथ धेरै राम्रोसँग काम गर्नुहोस्। मेरो आईफोन क्यालेन्डर मेरो गुगल क्यालेन्डरको साथ सिमलेस गरीएको छ र म कुनै पनि कागजात मेरो फोनमा लिन सक्छु। म मेरो फोनबाट कागजातहरू पनि सम्पादन गर्न सक्दछु! के यसको मतलब यो हो कि म बोक्न सक्दछु सबै म जहाँ जान्छु मसँग मेरो कम्पनी कागजातहरूको हो, यो सहि छ - मेरो कम्पनीमा प्रत्येक कागजात अब मेरो फोनमा पहुँचयोग्य छ। ईमेल पनि निर्बाध काम गर्दछ र सडकमा कुराकानी गर्न यो धेरै सजिलो बनाउँदछ।
क्लाउड को सुरक्षा
गुगल अनुप्रयोगहरूको सब भन्दा राम्रो बिक्री बिन्दु यो हो कि यसलाई चलाउन हार्डवेयरको कुनै लगानी आवश्यक पर्दैन। सबै गुगलको डाटा केन्द्रहरूमा होस्ट गरिएको छ र ईन्टरफेस SSL का साथ ईन्क्रिप्ट गरिएको छ। यसले न केवल धेरै पैसा बचत गर्दछ, तर तपाईंको संगठनलाई धेरै लचिलो बनाउँदछ। भर्चुअल कर्मचारीहरू कहिँ पनि प्रणालीमा सामेल हुन सक्छन्, अफिसहरू सार्न धेरै सजिलो हुन्छ, र तपाईंको डाटा तपाईंको अफिसमा भन्दा यो अधिक सुरक्षित हुन्छ। म ठट्टा गर्न चाहन्छु कि भोलि हाम्रो अफिसको आगो लाग्न सक्छ र हामी याद पनि गर्न सक्दैनौं किनभने हाम्रा प्रणालीहरू काम गरिरहन्छन्।
संगठनहरूको लागि स्मार्ट विकल्प
को व्यापार संस्करण Google Apps प्रति वर्ष user 50 प्रति प्रयोगकर्ता लागत र धेरै छिटो सेटअप गर्न सकिन्छ। मैले खाताहरू सक्रिय गरेको छु र मेरो ग्राहकहरू भित्र र दिन भित्रै चलिरहेका छन्। यदि तपाइँ तपाइँको हालको प्रणालीको साथ सञ्चार पीडा अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, कागजविहीन हुन चाहानुहुन्छ, टोली सदस्यहरूसँग राम्रोसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ, वा केवल सुरू गर्न चाहानुहुन्छ। तपाइँको अफिस सफ्टवेयरमा पैसा बचत गर्दै, म तपाईंलाई गुगल अनुप्रयोग कोशिस गर्न प्रोत्साहन दिनेछु।
कृपया मलाई जानकारी दिनुहोस् यदि म मद्दत गर्न सक्छु। मलाई गुगलका साथ तपाईका अनुभवहरू सुन्न मन पर्छ, त्यसैले तल टिप्पणी दिनुहोस्!
टैग: DocuSignमार्केटिंग खोज्नुहोस्स्लाइडरवेबहुक्स
अप्रिल 12, 2010 मा 10: 55 एएम
आमेन। हामी हाम्रो सम्पूर्ण कम्पनी चलाउँछौं (http://raidious.com) गुगल एप्स मा, र हामीलाई कुनै समस्या छैन - धेरै सकारात्मक अनुभव। म चाहन्छु कि तिनीहरूले परियोजना व्यवस्थापन / कार्यप्रवाह उपकरण र यसको साथमा जानको लागि एक CRM उपकरण बनाउनेछन्!
अप्रिल 12, 2010 मा 11: 29 एएम
वास्तवमा, ट्याक्टिल सीआरएम मार्केटप्लेस via मार्फत गुगल अनुप्रयोगको साथ एकीकृत गर्दछ
अप्रिल 13, 2010 मा 7: 59 एएम
म मेरा सबै क्लाइन्टहरूका लागि गुगल एप्स सिफारिस गर्छु, आकारको पर्वाह नगरी। मैले तिनीहरूलाई ती मध्ये धेरैको लागि पनि सेट अप गरेको छु त्यसैले मैले अधिकृत पुनर्विक्रेता प्रक्रिया जाँच गर्न आवश्यक हुनेछ। MediaTemple को साथ होस्टिङमा मैले याद गरेको राम्रो चीजहरू मध्ये एउटा यो हो कि म होस्टमा सबै DNS सेटिङहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छु। मेरो डोमेन रजिस्ट्रारले कुनै पनि उन्नत DNS सेटिङहरूको लागि शुल्क लिन्छ, त्यसैले मैले त्यहाँ केही पैसा बचत गरेको छु।
अप्रिल 13, 2010 मा 10: 59 एएम
Diito! मैले जनवरी 1, 2010 मा आउटलुक त्यागें। यो एक सचेत निर्णय र त्यसो गर्न एक व्यापार निर्णय थियो। म सबै गुगल एप्स बाहिर गएँ र यसमा कुनै पछुतो छैन। म पनि मेरा सबै ग्राहकहरूलाई "GO GOOGLE" गर्न प्रोत्साहित गर्छु - त्यसो गर्न धेरै तरिकामा अर्थपूर्ण हुन्छ।